Waxyaalaha Laga sugayo inuu saxo Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud, Laguna qiimeyn doono waxqabadkiisa iyo Cadaaladiisa!!! Talooyin Xasaasi ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Hassan Sheikh Mohamud ayaa bulshada Soomaaliyeed Dal iyo dibadba soo dhoweysay, Madaxweynaha Cusub ayaa shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan kana filayaan inuu saxo qaladaad badan, Maamul xumo iyo cadaalad daro badan oo lagu sameeyay Shacabka Soomaaliyeed laga soo bilaabo Dawladii Madaxweynihii Dawladda KMG ee geeriyooday Col Cabdulahiu Yusuf iyo Risul wasaare Cali Maxamed Geedi. Maamul xumadii, Musuqmaasuqii iyo Cadaalad daradii ay bilaawday dawladii uu Raisul wasaaraha ka ahaa Dr Cali Mohamed Geedi ayuu Madaxweynihii hada laga guuleeystay Shariif sh Ahmed sii saaidiyey intuu sixi lahaa ama wax ka qaban lahaa, taasi oo keentay Naceybka ay u qaadeen umadda soomaaliyeed Meel kasta oo ay joogaan Madaxweynihii hore Shariif.
Qodobada muhiimka ah ee ay tahay Madaxweyne Hassan Sheikh iyo Xukuumadda Raisulwasaaraha uu dhisi doono inay si degdeg ah wax uga qabtaan waxaa ka mid ah qodobadaan soo socda:-
1- Madaxweyne Hassan Sheikh waa inuu Magacaabaa Raisulwasaare aqoon leh, wadani ah, Cadaalad u samayn kara shacabka Soomaaliyeed, ahna RW ay ka go'an tahay inuu dalka ka saaro Dhibaatada uu ku jiro.
2- Madaxweynuhu waa inuu ku gacan siiyo Raisulwasaaraha uu magacaabayo inuu dhiso xukuumad tayo leh, wadani ah, karti leh, Cadaaladna u samayn karta shacabka Soomaaliyed, wasiirada la magacaabayana ay noqdaan dad ay ka go'an tahay inay dalka iyo dadka badbaadiyaan, Wasiiradaasina aysan noqon kuwo xaasaskooda iyo ilmahooda ay qurbaha ku nool yihiin.
3- Madaxweynuhu waa inuu dib u habeyn ku sameeyo Ciidamada dawladda qeybaheeda kala duwan sida Milateriga, Booliska, Nabadsugida iyo ciidamada Asluubta, uuna ka shaqeeyo in ciidamada qalabka sida ee dalka ayna noqdaan ciidamo habeysan, kala danbeeya, qaab ciidan u dhisan, mushaharkoodu joogto yahay, tababar buuxa la siiyo, kana saaro ciidamada kuwa qaabka qabiilka u shaqeeya oo ku jira milateriga iyo booliska Soomaaliyeed.
4- Madaxweynuhu waa inuu xaqiijiyo inuu qaado isbaarooyinka muuqda iyo kuwa qarsoon oo gaaraya 50-ka isbaaro ee dhexyaalo xaafadaha iyo jidadka magaalada Muqdisho, isbaarooyinkaas oo uyaala maliishiyaadka dharka ciidanka wata.
5- Madaxweynuha, Raisulwasaaraha iyo xukuumadiisuba waa inay xaqiijiyaan inaysan dib danbe u dhicin in golaha wasiirada, Xildhibaanada, iyo dhamaan saraakiisha haya xilalka dawlada inaysan samaysan ciidamo iyaga u gaar ah oo ay kasoo kala kaxaystaan Milateriga iyo Booliska Soomaaliya, waa in la sameeyaa ciidamo si gaar ah loo tababaro oo ilaaliyo amniga masuuliyiinta dawladda Masuul kastana lasiiyo ciidan go,an oo aqoonsi wata.
6- Madaxweynuhu waa inuu saxaa Maamulka Gobolka Banaadir iyo 18 ka waaxood oo uu ka kooban yahay, waana in si cadaalad ah loo dhiso, maadaama 18-ka waaxood ee Maamulka Gobolka Banaadir ka kooban yahay 17-ka kamid ah ay hayaan hal beel, waaxaha Maamulka Gobolka Banaadir iyo Masuuliyiinta sare, iyo Dhamaan Maamulada Degmooyinka loo dhiibaa masuuliyiin aqoon leh oo degmooyinka ay maamulayaan kusoo kordhin kara waxqabadka shacabka u baahan yahay. Waana inaan la ogolaan in Madaxda Maaulka Gobolka , ku xigeenada, Waaxaha iyo Degmooyinka ay qortaan ciidamo qaraabadooda, una geliyaan dharka ciidanka, Balse Taliska Booliska, Nabadusgida inay madaxda Maamulka Gobolka Banaadir, degmooyinka ay siiyaan ciidan tababaran oo aqoonsiyo lasiiyo.
7- Dekedda, Ayraboorka, Bankiga iyo dhamaan Laamaha dawladda ee fadhigoodu Yahay Magaalada Muqdisho waa in loo dhiibo dad aqoon leh, dhamaan dadka soomaaliyeed ee kunool Muqdisho iyo dhamaan Soomaaliya ay ka wada dhex muuqdaan.
8- Dawlada cusub waa inaysan aqbalin aysana dib danbe u dhicin in Wasiirkii ka tirsan xukuumada inuusan u qaadan in wasaaradaas beel la siiyey, dhamaan laamaha wasaaradaas agaasimayaaysha, waaxyaha iyo shaqaalahana uusan ka dhigin Beeshiisa, ee waa in la xaqiijiyaa in wasaarad kastaahi ay noqotaa meel umadda Soomaaliyeed u dhaxaysa, dad aqoon lehna laga shaqo geliyaa, aysana dhicin in madaxda iyo shaqaalaha wasaaradaasna aysa u badnaanin qabiilka Wasiirka.
9- In dhamaan Safiirada, qunsulada iyo shaqaalaha Safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay Caalamka in loo magacaabo dad aqoon leh oo ay ka wada muuqdaan dhamaan qabaailka Soomaaliyeed, safaaradahaasna ay noqdaan kuwo lala xisaabtamo, oo aysan noqon dad markii la magacaabaa kadib iyagu sidii ay rabaan yeelaan. Dadka la magacaabayaana ay noqdaan Dad wadaniyaal ah oo ilaalin kara sirta Dawladda Soomaaliya, balse aysan noqon kuwa u shaqeeya wadamada ay safaaradu ka furan tahay.
10- Madaxweynaha, Raisulwasaaraha, Gudoomiyaha Baarlamaanka waa inay noqdaan kuwo lagu daydo shaqaalaha Xafiisyadooda ka shaqeynaya, ilaaladooda ay noqdaan dad Soomaalida oo dhan ay ka dhex muuqato, aysana dhicin inay qaraabadooda isku wareejiyaan.
11- Madaxweynuhu waa inuu noqdaa mid go,aan leh ninkii wax wanaagsan qabtana uu dhiirigeliyaa, qofkii xumaan sameeyaa ama cadaalad darana uu xilka ka qaadaa.
12- Madaxweynuhu waa inuu xaqiijiyaa Mashaariicda horumarinta ee Dalka Soomaaliya, kuwa Turkiga iyo kuwa Dawladaha kale iyo AMISOM-ba ay bixinayaan in si cadaalad ah ganacsatada Soomaaliyeed ay ugu tartamaan ee aysan dhicin in mashaariicdaas ay u xirnaadaan ganacsato gaar oo si qabyaaladaysan lagu siiyey shaqooyinkaas xiliyadii dawladihii isaga ka horeeyay.
13- Dawladda Cusub waa inay dalka gaarsiisaa in masuuliyiinta iyo madaxda Soomaalidu ay ku tartamaan wax u qabadka shacabka iyo Cadaaladda, qofkii aan shacabka wax u qabanayn, cadaaladna ahayn si degdeg ah xilka looga qaadaa, Masuuliyiinta Maamul wanaaga iyo cadaaladda hirgeliyana uu dhiirageliyaa.
14- Madaxweynaha iyo Masuuliyiinta Dawladda Cusub waa inaysan noqon dad ay shaqsiyaad maskaxda ka qabsadaan wax kasta oo ay qabanayaana ay noqdaan waxyaalo ay dadkaasi u yeeriyaan, ayna ogaadaan inay u dhaarteen Dalka, Dadka iyo Diinta .
15- Madaxweynuhu waa inuusan noqon mid u xagliya xubnaha ururka Al Islaax oo lagu sheego inuu mar ka tirsanaan jiray iyo xubnaha Xisbigiisa Maadaama shacabka doortay aysan xisbi dooran ee ay isaga doorteen maadaama aan dalka laga hergelin nidaamka axsaabta. Madaxweynuhu waa inuu si degdeg ah dalka uga hergeliyaa nidaamka Axsaabta loona sameeyaa sharciyo qaabka xisbiyada loo samaysan karo si looga baxo qabiilka iyo qabyaaladda.
16- Madaxweynuhu waa inuu xilalka ka qaadaa saraakiisha dawladda ee musuqmaasuqu dilooday, aaminsana xilalka ay hayaan in qabiilkoodu leeyahay.
17- Madaxweynuha, Raisulwasaaraha, Xukuumaduba waa inay noqdaan dad indhahoodu furan yihiin , lana socdaan waxyaalaha ka dhacaya Dalka, dhibaatooyinka dalka ka jirana ku mashquulaan sidii ay u xalin lahaayeen.
18- Madaxweynaha, Raisulwasaaraha iyo Dhamaan Golaha Wasiirada waa inay xaqiijiyaan inaysan sii socon qaabkii Soomaaliya loogu qeybin jiray 3-da qeybood oo kala ahaa South Central, Puntland iyo Somaliland, aysana dhicin shirarka Caalamiga ah iyo kuwa Hay,adaha ee ka dhacaya Dalalka Dibadaha sida Kenya aysan dhicin in Wasiiro ama Masuuliyiin ka socda 3-daas qeybood in lagu casuumo. Maadaama dawladda Federaalka Soomaaliya ay dhamaan qabaailka Soomaaliya ku dhan yihiin, madaxda Dawlada federaalkuna waa inay xaqiijiyaan horumarka Maamulada Soomaliland, Puntland, Galmudug inay sii dhiirigeliyaan.
19- Dawlada Cusub waa inay noqotaa mid la socodsiisa shacabka Soomaaliyeed halka xaaladu marayso, dhiirigelisaana aqoonyahanka Soomaaliyeed in Dalka dib ugu soo laabtaan.
20- Dawladda Cusub oo Baarlamaanku ugu horeeyo inay saxaan qaladaadka Dastuurka ku jira, qodobada iska hor imaanaya, dastuurkana ka dhigaan mid shacabka Soomaaliyeed leeyihiin kana shaqeynaya danihiisa.
21- Madaxweynuhu waa inuusan ku mashquulin inuu lacag aruursado, ganacsato qaraabadiisa ah naas nuujiyo, Marka xilka ka dhamaan rabana uusan ku mashquulin sidii uu xukunka usii haysan lahaa.